Yakachipa Organic & Compound Granular Fertilizer Rotary Coating Machine Vanopa uye Fekitori | YiZheng
Organic & Remubatanidzwa Granular Fetiraiza Rotary unhani Machine chishandiso chekumhara pellets ine hupfu hwakakosha kana mvura. Maitiro ekupfeka anokwanisa kudzivirira kubatwa kwe fetiraiza nekuchengetedza zvinovaka muviri mu fetiraiza.
Chii chinonzi Granular Fertilizer Rotary Coating Machine?
Organic & Remubatanidzwa Granular Fetiraiza Rotary unhani Machine Coating muchina yakanyatsogadzirirwa pane chimiro chemukati zvinoenderana nezvinodiwa maitiro. Iyo inoshanda fetiraiza yakakosha yekumhara michina. Iko kushandiswa kwekuvhara tekinoroji kunogona kunyatso kudzivirira kuwanda kwefetiraiza uye kuzadzisa inononoka-kuburitsa mhedzisiro. Shaft yekutyaira inotyairwa neyekudzora nepo mota huru ichifambisa bhanhire uye pulley, ayo mapatya-giya ari kuita nhare huru yegiya padhiramu uye anotenderera ari kumashure nzira. Kudya kubva pokupinda uye kuburitsa kubva pakuburitsa mushure mekusanganisa kuburikidza nedhiramu kuti uwane kugadzirwa kuri kuenderera.
Maumbirwo eGranular Fertilizer Rotary Coating Machine
Mushini unogona kukamurwa muzvikamu zvina:
a. Chikamu chebracket: chikamu chebracket chinosanganisira bracket repamberi uye bracket rekumashure, iro rakagadziriswa pane inoenderana hwaro uye rinoshandiswa kutsigira dhiramu rese rekumisa nekutenderera. Bracket inoumbwa nebracket base, rutsigiro vhiri furemu uye rutsigiro vhiri. Kureba uye Angle yemuchina inogona kugadziriswa nekugadzirisa nzvimbo pakati pemavhiri maviri anotsigira kumberi nekumashure mabhureki panguva yekumisikidza.
b. Chikamu chekufambisa: chikamu chekutumira chinopa simba rinodiwa kumuchina wese. Zvikamu zvaro zvinosanganisira kutapurirana furemu, mota, mativi bhandi, chinodzora uye giya kutapurirana nezvimwewo, Kubatana pakati pekudzora uye giya kunogona kushandisa yakananga kana kubatanidza zvinoenderana nesaizi yekutyaira
c. Dhiramu: dhiramu ndiyo chikamu chinoshanda chemuchina wese. Kune bhandi rinotenderera rekutsigira uye rin'i yegiya yekufambisa kunze kwedhiramu, uye kunetseka kwakasungwa mukati kutungamira zvinhu zvinoyerera zvishoma nezvishoma uye zvakapfekera zvakaenzana.
d. Bemhapemha chikamu: bemhapemha pamwe upfu kana unhani mumiririri.
Zvimiro zveGranular Fertilizer Rotary Coating Machine
(1) Iyo poda yekutsidzira tekinoroji kana emvura yekumhanyisa tekinoroji yagadzira uyu muchina wekubatsira kubatsira kudzivirira komputa mafetira kubva mukugwamba.
(2) Iyo mainframe inotora polypropylene lining kana acid-inomiririra simbi isina simbi lining ndiro.
(3) Zvinoenderana neakasarudzika matekinoroji anodhinda, uyu muhombodo wekutenderera michina wakagadzirwa neakasarudzika chimiro chemukati, saka inoshanda uye yakakosha michina yemakomputa fotereza.
Granular Fertilizer Rotary Kuputira Machine Vhidhiyo Ratidza
Granular Fertilizer Rotary Kucheka Machine Model Sarudzo
Vipimo mushure mekuisirwa (mm)
Pashure: Michina Drum Kutonhora Machine
Zvadaro: Hot-mhepo chitofu
Nhanganyaya Chii chinonzi Vertical Fertilizer Mixer Machine? Vertical Fertilizer Mixer Machine chinhu chakakosha pakusanganisa michina mukugadzira fotereza. Inosanganisira yekusanganisa silinda, furemu, mota, chinodzora, ruoko rinotenderera, inomutsa foshoro, kuchenesa chinotsvaira, nezvimwewo, mota uye nzira yekufambisa yakaiswa pasi pemusanganiswa ...